ICanLocalize: Ngendlela Engabizi Humusha Isiza Sebhizinisi Lakho Ukufinyelela Izithameli Ezintsha | Martech Zone
ICanLocalize: Ngendlela Engabizi Humusha Isiza Sebhizinisi Lakho Ukufinyelela Izithameli Ezintsha
NgoLwesithathu, uDisemba 23, 2020 NgoLwesithathu, uDisemba 23, 2020 Douglas Karr
I-ejensi yami isebenza ngokusiza inkampani ephathelene nokunakekelwa kwezempilo ngezilimi ezimbili ukwakha isayithi yabo, ikwenze kube ngcono ukusesha, futhi ithuthukise ukuxhumana kwezokukhangisa namakhasimende abo. Ngenkathi benesayithi elihle le-WordPress, abantu abalakhele bathembele kulo ukuhumusha ngomshini izivakashi ezikhuluma iSpanishi. Kunezinselelo ezintathu ngokuhunyushwa komshini wesayithi, noma kunjalo:
Ukuxhuma - Ukuhunyushwa komshini waseSpain akuzange kubheke iMexico ulimi yezivakashi zayo.
Amatemu - Ukuhunyushwa komshini akukwazanga ukwelashwa okuthile isichazamazwi.
Ukuhleleka - Ukuhumusha, ngenkathi kukuhle, bekungeyona ingxoxo ngokwemvelo… isidingo lapho kukhulunywa nezethameli eziqondiwe zaleli klayenti.
Ukuze sikwazi ukwamukela bobathathu, bekufanele sidlulele ngalé kokuhumusha komshini bese siqasha insiza yokuhumusha yesayithi.
Izinsizakalo Zokuhumusha zeWordPress zeWPML
With I-plugin yezilimi eziningi yeWPML netimu enhle ye-WordPress (I-Salient) esiyasisekelayo, sikwazile ukuklama nokushicilela isiza kalula sabe sesifaka nezinsizakalo ze-WPML's Translation Services ukuhumusha ngokugcwele isayithi ngokushibhile ICanLocalize's imisebenzi ehlanganisiwe yokuhumusha.
ICanLocalize Insizakalo Yokuhumusha Ehlanganisiwe
ICanLocalize inikeza insizakalo edidiyelwe esheshayo, enobuchwepheshe, futhi engabizi. Banikeza abahumushi bomdabu abangaphezu kuka-2,000 45 abasebenza ngezilimi ezingaphezu kwezingu-XNUMX. Amanani abo aphansi kakhulu kunama-ejensi wendabuko amukela kuphela amabhizinisi amakhulu noma adinga noma yiluphi uhlobo lokusetha i-akhawunti mathupha.
Usebenzisa i-WPML Translation Dashboard ehlanganiswe ne-ICanLocalize, ungakhetha izinto ozozihumusha bese uzifaka kubhasikidi wokuhumusha. Ukubalwa kwamagama nezindleko kubalwa ngokuzenzakalela bese kufakwa ekhadini lakho lesikweletu ku-akhawunti yakho ye-ICanLocalize. Ukuhumusha kulayini futhi kushicilelwa ngokuzenzakalela ngaphakathi kwesiza sakho.
Ngaphandle kwamasayithi we-WordPress akhiwe nge-WPML, i-ICanLocalize ingahumusha nemibhalo yehhovisi, amafayela e-PDF, isoftware, izinhlelo zokusebenza zeselula, kanye nemibhalo emifushane.
Ukudalulwa: Ngisebenzisa isixhumanisi sami sokuxhumana se- ICanLocalize.
Tags: ukuhumusha okungabiziincanlocalizeukuhumusha okuhlanganisiweukuhumushaizinsizakalo zokuhumushai-wordpress izilimi eziningiplugin wordpressukuhumusha kwe-wordpressinsiza yokuhumusha i-wordpresswpml
Amasayithi E-Stock Footage: Imiphumela, Iziqeshana Zevidiyo, Nemifanekiso